Glossary Term - Chelate Famaritana
Ny fiheverana Chelate
Inona ny Chelate amin'ny Chemistry?
Ny sela dia fikambanana organika izay miforona rehefa mifamatotra ligandin'ny polydentate amin'ny atomaty metaly afovoany. Ny Chelade, araka ny IUPAC , dia midika ho fananganana fifamatorana roa na maromaro misaraka miavaka eo amin'ny atomika ligand sy afovoany. Ireo ligandy dia ny teny hoe chelating agent, chelants, chelators, na agent agents.
Fampiasana an'i Chelates
Ny fitsaboana Chelel dia ampiasaina hanesorana ireo toaka misy poizina, toy ny amin'ny famonoana metaly mavesatra.
Ny chelation dia ampiasaina hanamboarana fanafody amin'ny sakafo. Ireo mpitrandraka kalitika dia mampiasa amin'ny alàlan'ny fanafody, hanomana kata siramamy, ary ho toy ny fanoherana mpitsikera ao amin'ny MRI.
Ohatra avy amin'i Chelate
Ny ankamaroan'ny molekiolan'ny biochemika dia afaka mamongotra ireo kômetà metaly mba hamorona kompleman-kafe. Ny asidra polynukleika, proteinina, amino asidra, polypeptides, ary polysaccharides dia samy miasa toy ny polydentate ligands.
Ny ligand ethylenediamine bikaida dia mamolavola komplexa kelata miaraka amin'ny iony varahina mba hamorona perla CuC 2 N 2 dimy.
Ny ankamaroan'ny metalloenzymes dia mifototra amin'ny metaly mifangaro, indraindray amin'ny cofactors, peptides, na vondrona antoko.
Ny fiverimberenan'ny tosi-drà mahery dia matetika noho ny organika fitrandrahana akoho metaly avy amin'ny vato sy mineraly.
Maro ny fikarakarana sakafo ara-tsakafo novolavolain'ny metaly metaly mba hiarovana ny metaly tsy hamorona sira miaraka amin'ny salohy tsy misy fotony ao amin'ny vavony. Izany fanampiana izany dia manome fahafaha-maivana ambony kokoa ho an'ny fanodinana.
Ireo kisendraseran'ny homogene, toy ny chloride rôtnium (chloride) mifamatotra amin'ny phosphine bidentate, matetika dia rafitra feno fifangaroana.
Ny EDTA sy ny phosphonates dia mpikirakira mahazatra ampiasaina hanalefahana ny rano.
Inona no atao hoe astronomia ary iza no manao izany?
Manana Ny Diovina ve ny Ice?
Biôlôjika sy suffixes: erythr- na erythro-
Ahoana no anaovana ny fluoride mba hisakanana ny fihenan'ny sela?
Ohatra avy amin'ny molekiolan'ny Polar sy tsy Polôla
Inona ny pH an'ny menaka voajanahary?
Famaritana ny Bitumen
Ilaina ny fahalalana Vocabulary ho an'ny trano fisakafoanana frantsay
Ny Ady ho an'ny Topi-boronkely kely ao Gettysburg
Miavaka eny amin'ny Centre Green
1961 Ryder Cup: Fiovàna ho an'ny formata, fa Etazonia hafa koa
Famaritana ny Resource and its Consequences
Ahoana no fiheveran'ny filozofa momba ny hatsaran-tarehy?
Boldt Castle any amin'ny Nosy Thousand
Antony 12 no tiako sy ankizilahy ho talen'ny sekoly
Ny Programan'ny Gymnastics Junior Olympics
BAKER - Faminaniana sy anarana
Fampidirana ny Literatiora Gothique
Uranus - Ny Planeta amin'ny fanandroana
SAT sy ACT Fandraisana andraikitra ho an'ny Colleges Maine
Vokatry ny mediam-bahoaka ho an'ny mpianatra anglisy
Fomba hananganana fifanaraham-bahaolana amin'ny kolontsaina
Inona no atao hoe Echo Teny?
Ny fahasamihafana eo anelanelan'ny tapatapaka, mihintsana ary mihidy